Hiran State - News: Inta badan kalkaaliyayaasha Shiikh Shariif oo xililkooda iska casilayo kadib markii ay sheegeen ineysan la shqeyn karin.
Inta badan kalkaaliyayaasha Shiikh Shariif oo xililkooda iska casilayo kadib markii ay sheegeen ineysan la shqeyn karin.
HS:-Inta badan kalkaaliyayaasha Shiikh Shariif oo xililkooda iska casilayo kadib markii ay sheegeen ineysan la shqeyn karin.
Shiikh Shariif Shiikh Ahmed oo ah hogamiyaha koofurta Somaliya amaba Mogdisho iyo nawaaxigeeda ayaa maalinba malinta ka danbeysa la kulmayo siyaasado isbed bedel badan oo aaqirka dhaxalsiiyey isaga iyo inta ka ag dhaw fashil.
Marka aanu dib u jaleecno dhacdooyinkii ugu danbeyey ee ka dhaca xafiiska Shariifka. warar lagu kalsoon yahay ayaa shegaya in inta badan kalkaaliyaasha Shariifka amaba agaasimo hoosaadyada xafiiskiisa intooda badan isku diyaarinayaan iney shaqada iskaka tagaan kadib xaalada hada lagu jiro iyo siyaasadaha qalafsan ee Shariifka oo hada maraya heer aan caadi aheyn.
Warku waxuu intaasi ku darayaa in mid ka mid ah dadka aadka uga ag dhaw xafiiska Shariif oo ah aqoonyahan reer Hiiraan ah oo magaciisa lagu soo gaabiyey Buqaari uu u gudbiyey warqaadii istiqaalada Shiikh Shariif si uu uga tago howshii uu Villada ka hayey. masuulkaan oo ay siyaabo kala duwan u weydiiyeen muwaadiniin Somaliyeed oo reer Hiiraan u badan ayaa hadalkiisa ku soo koobay in uu isagu go,aankan gaaray. laakinse nuxurka hadalkiisa ayaa noqday in aan Shariifka lala shaqeyn karin.
Hadaba ma ahan oo kaliya Masuulkaan inta arintaan dooneysa iney ku dhiiirato laakinse waxaa jidka ku soo jira shaqsiyad badan oo naga codsaday in aan magacooda la sheegin inta ay go,aanka Buqaari oo kale ka qaadanayaan.
Marka laga soo tago qaabka ay shaqada ugu tagayaan dadkii Shariifka uga dhawaa, hadane wararka qaarkood waxey leeyahiin inta badan aqoonyahanada Somaliyeed ee la shaqeyn jirtay amaba hada la shaqeyaan Shariifka waxey doonayaan iney siyaasada ku sii jiraan si ay uga bad baadan fashilka Shariifka.
Hadaba la soco war bixin xasaasi ah oo aanu ka soo diyarinay TFGda iyo fashilka ku dhacay ee afka laga ilaalinayo.
· admin on November 02 2011 21:54:11 · 0 Comments · 1680 Reads ·
14,633,092 unique visits